Dowladda Soomaaliya oo markale dalka dib ugu soo celisay tahriibayaal ku xirnaa Liibiya – Radio Daljir
Dowladda Soomaaliya oo markale dalka dib ugu soo celisay tahriibayaal ku xirnaa Liibiya
Maajo 9, 2019 3:26 b 0
Dowlada Federaalka Soomaaliya ayaa dalka dib ugu soo celisay dhallinyaro tahriibayaal ah, kuwaasi oo muddo ku xirnaa Xabsiyada dalka Liibiya.
Dhallinyarada oo gaaraya 14 qof waxa ay ka kala tahriibeen Muqdisho, Garowe, Hargeysa iyo Jigjiga, iyagoo dhawr sano ku xirnaa Xabsiyo kuyaala dalka Liibiya, halkaasoo ay ku heysteen kooxaha Dadka qafaasha ee Magafayaasha ah.
Waxaana maanta Nasiib ay u yeesheen inay dib dalkooda ugusoo laabtaan kadib markii ay arintaas Dadaal wayn ugashay Dowladda Soomaaliya gaar ahaan Danjire Maryam Yaasiin oo ah Ergeyga gaarka ah ee Xuquuqda Carruurta iyo Tahriibayaasha ee Xafiiska Ra’iisalwasaaraha.
Markii ay soo gaareen magaalada Muqdisho waxaa si heer sare ah usoo dhaweeyey Mas’uuliyiin ka socotay Xafiiska Ergeyga gaarka ah ee xuquuqda Carruurta iyo tahriibayaasha ee Xafiiska Ra’iisal wasaaraha, Madaxda Hay’adda Qaxootiga Qaranka iyo barakacayaasha, guddiga dib usoo celinta Tahriibayaasha ee Dowlada iyo Wakiilo matalayey hay’adda Socdaalka Aduunka ee IOM.
Qaar kamid ah dhallinyaradi soo noqday maanta oo la hadlay Warbaahinta ayaa sheegay inay ku faraxsanyihiin dib ugusoo laabashada dalkooda, iyagoo u mahadceliyey Madaxda Qaranka iyo Ambassador Maryan Yaasiin Doorkooda Ku aadan soo sii deyntooda. waxayna ka sheekeen dhibaatadii ay kalasoo kulmeen Dalka Libiya.
RW khayre oo xalay ku dhex lugeyeey Caasimadda Puntland ee Garoowe (Daawo)